High School တွင်လူဆိုး Escape (High School Gangster Escape)
ပြစ်မှုဆိုင်ရာထွက်ပေါက်ဂိမ်း Play! အထက်တန်းကျောင်းလွတ်မြောက်ရန်! ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်အထက်တန်းကျောင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဆုံလည် Fusion မလှုပ်မရှား Clicker (Turret Fusion Idle Clicker)
ပေါင်းစပ်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပျင်းရိဂိမ်း; ဒီကိုဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူတကျွန်းတနိုင်ငံသားကျူးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးမဆုတ်မနစ်ကျူးကျော်ချ mow ရန်သင့်တာဝါတိုင်ကိုသုံးပါ။
တင်းနစ် Manager က 2018 (Tennis Manager 2018)
High School တွင်အုပ်စုဖွဲ့ (High School Gang)
အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုအတွင်းမြို့အထက်တန်းကျောင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အရာခပ်သိမ်းဟာပန့်ခ် posse အားဖြင့် run သည်။ ဒါဟာကျောင်းသားများကိုအိမ်ရှေ့တံခါးမှာသတ္တု detector ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များပါ!
Garfield အန်စာတုံး Rush (Garfield Dice Rush)
Garfield အန်စာတုံး Rush လူကြိုက်အများဆုံးဂန္ထဝင်အန်စာတုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း, သက်သက်ကံအပေါ်အခြေခံပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအောက်ဒေသဆိုင်ရာပင်လယ်ဓားပြများနှင့်အများအပြားအန္တရာယ်များနှင့်အတူမြားမြားကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှသမုဒ္ဒရာစူးစမ်းဘို့သင်္ဘောများနှင့်နောက်လိုက်များကိုထိန်းချုပ်မယ့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ် choosed သူကိုပင်လယ်ဓားပြဖြစ်ကြသည်။
အထောက်အထား V ကို (Identity V)
အခြို့သော iOS ကိုဘွတ်ကင်ကစားသမားဂိမ်းကြုံတွေ့ရပေမည်ချစ်ခင်ရပါသောစုံထောက်, Apple ရဲ့ Store မှာဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုနေဆဲ "ကြိုတင်မှာယူမှု" ၏ status ကိုပြသသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Apple ရဲ့ Store မှာ Apple ရဲ့ ID ကိုအကောင့်ကိုပိတ်ပြီးဖြေရှင်းရန်နောက်တစ်ကြိမ်လော့ဂ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းပရိတ်သတ်များအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသော All-အသစ်သောနဂါး Ball ကိုစမတ်ဖုန်းဂိမ်းအဆင်သင့်ရယူပါ! ဇာတ်ကောင်အသံနှင့်အရည်အသွေးမြင့် 3D အဆင့်ဆင့်အတွက်အထဲကတိုက်ဖျက်! ကမ္ဘာအနှံ့ကနေပြိုင်ဘက်ကစားသမားများဆန့်ကျင် 1 လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင် 1 ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
Wildlands: Survival ၏ Saga (Wildlands: Saga of Survival)
high-စိတ်ကူးယဉ် Stormfall စကွဝဠာ၌ဤအခမဲ့-to-play စစိတ်ကူးယဉ်ရှင်သန်မှု MMORPG အစုံအတွက်ရှင်သန်, စူးစမ်းနှင့်မာစတာ swordcraft နှင့်တတ်။
ကြောက်စရာသရဲခြောက်သောအိမ်စွန့်စားမှု: Survival Horror (Scary Haunted House Adventure: Horror Survival)
သရဲခြောက်သောအိမ်စွန့်စားမှုကြောက်စရာကစားဂိမ်းများ, Survival Horror ဂိမ်း၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားရသည်။ အဆိုပါသရဲခြောက်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားစွန့်စားမှု၌ဒုစရိုက်ကိုတစ်ဦးတိုက်ခိုက်သည့်မမျှော်လင့်
အသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်သေဆုံး, ဒီရှင်သန်မှုစစ်တိုက်တော်ဝင်ဂိမ်း၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ ချုံနောက်ကွယ်မှတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်နေသည် ...